Ongakubona - Izindaba Zokuvakasha | Izindaba Zokuvakasha (Ikhasi 2)
IKamakura ingenye yezivakashi ezijwayelekile ezingenziwa zisuka eTokyo, inhlokodolobha yaseJapan. Uma umhlaba ...
Yini ongayibona eMontevideo
ENingizimu Melika, echwebeni lomfula iRío de la Plata, kunezwe elincane elibizwa nge-Uruguay. Okwakhe…
Indawo ebonwa ngabahambi abaningi inamabhishi, ilanga namanzi aluhlaza. Kunezindawo eziningana ezinalezi zici, kepha ...
ISarajevo iyinhloko-dolobha yaseBosnia neHerzegovina, idolobha elinokuluhlaza okuningi, elisesigodini esizungezwe ...
Iphupho lawo wonke ama-movie buff ukuya eLos Angeles ukuvakashela wonke amakhona eDolobha lase ...
Kunamadolobha anobungani kakhulu ukuwavakashela nezingane ngoba anikeza izinkambo, iminyuziyamu, imisebenzi, ukwakheka okulula ukuzula ...
I-Melika iyizwekazi elikhulu kakhulu elihamba liye ekugcineni komunye umkhawulo womhlaba. Kunamazwe amaningi, kepha ngaphandle kokungabaza ...
Okufanele ukwenze eDresden
IDresden yidolobha laseJalimane, inhlokodolobha yezwe laseSaxony. Kuyidolobha elidala, elinamasiko kakhulu, elikhulu uma uthanda ...
Izimangaliso eziyisikhombisa zomhlaba
Kusukela ngo-2007 kunezimangaliso ezintsha eziyi-7 Zomhlaba wanamuhla ezikhethwe ocwaningweni lomhlaba ngabangaphezu kuka-90 ...
ITransylvania, izwe lobuhle nemfihlakalo
NgesiLatin iTransylvania isho "umhlaba ongaphesheya kwehlathi." Kuyindawo enhle impela yezintaba namahlathi. Igama lakho…
Kunemigudu yokufakelwa isintu eyakhe umhlaba futhi edume umhlaba wonke. Enye yazo ...
Uhambo oluya e-Ethiopia
Ngithanda izindawo ezingaziwa, ngaphandle kwethrekhi eshayiwe. Futhi kungenxa yokuthi ngaphezu kwesivakashi engithanda ukuzizwa ...
Omunye wemifula edume kakhulu emhlabeni ngokungangabazeki uMfula iNayile. Ungangitsheli ukuthi awuna ...
Esinye sezinhloko-dolobha ezithakazelisa kakhulu ukuvakashelwa eNingizimu Melika yiLima, inhlokodolobha yasePeru. Kuyinhliziyo ...
I-Agadir, indawo okuyiwa kuyo eMorocco
Lapho isidlula wonke umuntu uzobe elapho elinde izivakashi. Kuthiwani ngokuthatha uhambo olufushane oluya eMorocco? Kuthiwani ngokuhamba ...
Yini ongayibona eBologna
I-Italy ingenye yezindawo ezinhle zokuvakasha eYurophu. Umlando, amasiko, namathafa ... Umuntu angazula izinsuku eziningi kuwo ...
Yini ongayibona eYucatan
IMexico iyizwe elihehe kakhulu, linezinkulungwane zeminyaka yomlando namasimu amahle. Esinye sezikhungo zayo zezivakashi ...
I-Alcalá del Júcar
Imenyezelwe inkimbinkimbi yomlando nobuciko kusukela ngo-1982, i-Alcalá del Júcar ingomunye womasipala abahle kakhulu eSpain. Cishe…
Izindawo ezinhle zokubuka ukushona kwelanga
Ukushona kwelanga kungenye yezikhathi ezithakazelisa kakhulu zosuku. Isithombe sokushona kwelanga emkhathizwe ngu ...
IVillanueva de los Infantes
Omunye wabomasipala abahle kakhulu esifundazweni saseCiudad Real kanye ne-Almagro yiVillanueva de los Infantes, ...
Elinye lamadolobha elinesisindo salo emlandweni yiNuremberg. Ngicabanga ukuthi simazi kakhulu ezincwadini ...
Yini ongayibona eFlorida
Esinye sezifundazwe ezakha iMelika yiFlorida. Kuyisimo lapho kuhlala khona abantu abaningi kanye nokwakheka kwaso ...
Yini ongayibona eHong Kong
IHong Kong iyindawo eyahlukahlukene, icebile, inesivakashi isivakashi, iyathakazelisa kakhulu ... Kufanelekile ukuvakashela leli dolobha izinsuku ezimbalwa noma ...
Elinye lamazwe amahle kakhulu ohambweni yi-Australia: inezinhlobonhlobo zamasimu, kungokwesimanje, nge ...
Idolobha elikhulu kunawo wonke eSwitzerland yiZurich, isikhungo sayo sezomnotho, ezezimali kanye neyunivesithi. Ungafika lapho ngendiza, ngomgwaqo ...
I-Antwerp, indawo eFlanders
I-Antwerp iyinhloko-dolobha yesifundazwe esinegama elifanayo, esiseFlanders. Idolobha elihle, kuphela i-40 ...
Yini ongayibona eFlorence ezinsukwini ezi-3
IFlorence ingelinye lamadolobha amahle kakhulu e-Italy. Ineminyuziyamu yonke indawo, amasonto amadala, izikwele ezinhle, okuhle ...
Yini ukubona eMadagascar
IRiphabhlikhi yaseMadagascar yizwe eliyisiqhingi elisoLwandlekazi lwaseNdiya oluhle futhi olufudumele. Yisiqhingi ...
ILas Hurdes akuseyona indawo ebuyela emuva uBuñuel ayivezile. Namuhla bakunikeza imihlaba ehlaba umxhwele ne-gastronomy enhle kakhulu.
IHungary ingaba yizwe elincane kepha inezindawo eziningi i-UNESCO ezibheka njengezifanele isikhundla seGugu Lomhlaba. Nini…
Yini ongayibona kuJaca
Uma uke wazibuza ukuthi uzobona ini eJaca, sizokutshela ukuthi idolobha lase-Aragonese licebile ngamagugu amakhulu futhi linezindawo ezinhle zasePyrenean.
Uhambo oluya e-iceland
Uma uthanda izindawo zokugeza ezishisayo nemvelo yasendle, njalo kuyinselele, khona-ke kufanele uvakashele i-Iceland. UNdunankulu umemezele ...
I-Amsterdam iyinhloko-dolobha yaseHolland, indawo egxila ezintweni eziningi ezithakazelisayo ukuzibona nokuzenza, phela ...
Bath, indawo yaseBrithani
Uma uthanda amanoveli kaJane Austen noma iyiphi ifilimu yesiNgisi eyenzeka ngekhulu le-XNUMX, nakanjani ...
Amabhati ama-Arab aseGranada
Ukugeza kahle kuyaphumula, emzimbeni nasemphefumulweni. Amasiko amaningi akuqonda ngaleyo ndlela, yize kwakukhona ...
IBudapest ingelinye lamadolobha athandwa kakhulu eYurophu ukuthatha uhambo. Izivakashi ezingaphezu ...
Ukwakha umngcele wemvelo phakathi kwe-United States neCanada, iNiagara Falls ingumbukwane wemvelo owakhiwa izimpophoma ezintathu ...
Uhambo oludabula iKapadokiya
Elinye lamakhadikhadi athandwa kakhulu eTurkey yiCappadocia, isifunda esingumlando esinqamula izifundazwe eziningana futhi ...
Enye yezinto eziheha izivakashi enhlokodolobha yase-UK yiTower of London. Lapho ngibuya…
I-Afrika iyizwekazi elihle uma uthanda imvelo nezilwane zasendle. Lapha, okunye ...
IGrisi yindawo okungafanele ilahlekelwe yisihambi kuyo. Inakho konke: i-gastronomy engakholeki, umlando omningi, amasiko amaningi futhi ...
Yini ongayibona kuRibeira Sacra
Sikutshela ezinye zezinto ezikhangayo ezinkulu ezingabonakala endaweni yaseRibeira Sacra eGalicia.
Yini ongayibona eBergen
Uma uvakashela iNorway, iBergen izoba sohlwini lwakho njengoba kuyidolobha lesibili ngobukhulu e ...
ISalar de Uyuni, indawo esezulwini eBolivia
INingizimu Melika iyindawo enhle, indawo enomlando wasendulo namathafa amahle. Okweso laseYurophu eliqukethe, ...
Yini ongayibona eTurkey
IRiphabhlikhi yaseTurkey ihlukanisa indawo yayo phakathi kweYurophu neAsia, futhi izwe elicebile e ...
Vakashela Ugwadule LwaseNamib
Iplanethi yethu inezindawo ezinhle neziphambene ngokufanayo. Kunemifula yamakhorali, amahlathi asezindaweni ezishisayo, amabhishi okuphupha, izintaba eziqhekeza ...
Sikutshela konke okungabonakala nokuthi ungafika kanjani e-arozaro Waterfall yoMfula iXallas eGalicia.
Amakhadikhadi amaningi avela e-United States aziwa nge-cinema futhi namhlanje sengeza okunye ohlwini: ...
Yini ongayibona eChinchón
Kunabaningi abachaza iChinchón njengedolobha elihle kunawo wonke eMadrid njengoba kungelinye lamadolobha ...
Isikhathi eside inqubekela phambili ibingatholakali emazweni aseNyakatho Yurophu, kodwa selokhu kwaphela ...
INaples nezintelezi zayo
Elinye lamadolobha amakhulu e-Italy yiNaples, inhloko-dolobha yaseCampania. Futhi kuyindawo enhle yezivakashi esevele ...
ITurin yayiyinhloko-dolobha yoMbuso WasePaimonte-Sardinia, obhekene nokuhlanganiswa kwe-Italy. Ikunikeza izikhumbuzo eziningi kanye ne-gastronomy enhle.
ICape Town ingelinye lamadolobha abaluleke kakhulu eNingizimu Afrika yingakho ingenye yezindawo zayo ...
Yini ongayibona eKyoto
Namuhla iJapan isemfashinini. Emashumini amabili edlule ibingenakho ukuvakasha okungaka kodwa eminyakeni eyishumi nanhlanu edlule ...
Sikutshela okungahle kubonakale eTorres del Paine Natural Park enhle eseChile, enamachibi eqhwa, izintaba kanye neqhwa.
UCaldes de Montbui
Eduze kakhulu neBarcelona, ​​idolobha laseCaldes de Montbui laziwa ngamanzi alo ashisayo. Kepha futhi ikunikeza izikhumbuzo kanye ne-gastronomy ecebile.
Yini ongayibona ku-Calaceite
Thola ukuthi yini esingayibona edolobheni laseCalaceite, indawo lapho ungathola khona idolobha elihle elidala namagugu abalulekile.
Leli sonto likhethekile kulabo abajabulela izimanga zangaphansi komhlaba, uhambo nezingane noma imihlaba e ...
I-Cuevas del Águila, isimanga esingaphansi komhlaba
Imihume yizindawo ezinhle kakhulu kubantu abaningi basendulo ezazibonakala zingena emnyango wabafileyo. Kude nemilingo, ...
IMeya yaseBárcena yidolobha elincane elisemaphandleni eCantabria elibonakala liqiniswe ngesikhathi. Ikunikeza imizila yezintaba, ukuthula nokuzilibazisa okucebile.
Vakashela iSan Pedro Alcántara
ISpain inezindawo eziningi zabavakashi ezingase zingathandwa kakhulu izivakashi zakwamanye amazwe. Isikhathi soku ...
Enye yezindawo zokuvakasha ezidume kakhulu nezidumile emhlabeni yisiqhingi saseBali. Uma sikhuluma ngobuhle, ...
IPyrenees yase-Aragonese ingenye yezindawo ezinhle kakhulu eSpain. Ikunikeza izimangaliso zemvelo, amadolobha amahle nokudla okumnandi.
Dlula ngaphesheya kweBrooklyn Bridge
INew York ingelinye lamadolobha ahamba phambili emhlabeni futhi inezimpawu eziningi noma yiziphi izivakashi ezifuna ukuzazi. Eyodwa…
IDisneyland yinkampani yezizwe ngezizwe futhi yakhe "amagatsha" kwezinye izingxenye zomhlaba, ngakho-ke abantu abanayo ...
Amadolobha Charming eduze Madrid
IMadrid ingenye yamadolobha amakhulu aseYurophu. Kepha, eduze kwedolobha elikhulu, uzothola amadolobha amahle okufanele uwavakashele.
Yini ongayibona ku-Écija
Sikukhombisa okungabonakala edolobheni lase-Écija e-Andalusia, indawo enomlando omuhle, izakhiwo ezinhle nezinsalela zemivubukulo.
Yini ongayibona eCopenhagen
Namuhla amazwe aseNyakatho Yurophu asemfashinini. ICinema, uchungechunge, i-gastronomy ... konke kusenza sifune ...
Yini ongayibona eTortosa
Thola lokho esingakubona edolobheni laseTortosa eliseCatalonia, idolobha elinomlando omningi nezikhumbuzo okufanele zivakashelwe.
Cáceres, ongakubona edolobheni elizokwenza uthandane
Ngokulingana nosayizi wayo, iCáceres kungaba idolobha elihle kakhulu eSpain. Sichaza ukuthi yini okufanele siyibone ukwazi okubaluleke kakhulu kwedolobha.
ILas Médulas, Amagugu Omhlaba
ISpain inezindawo eziningi ezinhle futhi ezinye akuwona umsebenzi wemvelo kodwa owomuntu nokusebenza kwakhe njalo ...
Kuthiwani ngokwazi iTenerife namuhla? Siqala isonto ngesiqhingi esikhulu kunazo zonke kweziyisikhombisa zeCanary Islands, okuhle ...
Eduzane noMfula iTagus: amadolobha ongawathola
UMfula iTagus uhamba amakhilomitha angaphezu kwenkulungwane phakathi kweSpain nePortugal. Sikukhombisa ongakubona emadolobheni amakhulu okugezayo.
Ukuhamba nge-Villa Borghese
IRoma yinhle unyaka wonke, kepha eziningi zezinto ezikhangayo zingaphandle entwasahlobo noma ...
Isigodlo esihle sase-Aljafería
ISpain inezinqaba eziningi, izinqaba nezigodlo zasendulo kanti ezinye zazo zisukela esikhathini sokubusa ...
Yini ongayibona eBerlin
IBerlin ingenye yezinhloko-dolobha ezivakashelwe kakhulu eYurophu futhi yize ingumbono wayo ayikhanyi njengeParis noma ...
ISan Andrés de Teixido, ibheke olwandle
Uma uthanda izindawo ezinhle kakhulu, ezinamawa, ulwandle nesibhakabhaka esincibilika emafwini, iGalicia isinikeza ...
Isigodi saseHunza kanye nenganekwane yentsha engunaphakade
Isigodi saseHunza sisePakistan, izwe ngokusho kwabezindaba zasentshonalanga cishe eli ...
Yini ongayibona kuma-Sil Canyons eGalicia
Sikutshela konke okungabonakala eCañones del Sil, indawo engokwemvelo lapho ungajabulela khona izindawo zokubuka nokuhamba ngesikebhe.
Sizokukhombisa zonke izindawo onentshisekelo kuzo zedolobha laseSantander, eCantabria, ngendawo ye-bay nedolobha lakhona elidala.
Ezokuvakasha eLake Garda
Amachibi ayizindawo zokuzithandela zamaholide ebusika nasehlobo, futhi enye yezindawo ezinhle kakhulu ...
Yini ongayibona eCádiz
Sikutshela konke ongakubona nokwenzayo edolobheni elihle lase-Andalusiya iCádiz, elinye lamadala kunawo wonke eYurophu.
Yini ongayibona eMallorca
Sesivele singoNovemba futhi amakhaza eza kanzima. Uma ungayithandi futhi ungomunye walabo ...
Izindawo ezinhle zemvelo ezi-5
Iplanethi yethu inezindawo ezinhle zemvelo, ngethemba lokuthi, zizogcinwa ngokuhamba kwesikhathi. Kuya ngathi ngakho-ke kufanele ...
Uhambo oluya e-Equatorial Guinea
Kunamazwe amabili kuphela e-Afrika aneSpanishi njengolimi lwabo olusemthethweni kanti elinye lawo yi-Equatorial Guinea….
Burj Khalifa, ekhomba esibhakabhakeni
Ngihlala ngisho ukuthi abantu bathanda ukusondelana nezulu, nokwakha izakhiwo ...
Imoto yekhebula laseMadrid
Uma uhamba ngezinyawo uye enhlokodolobha yaseSpain futhi ufuna ukuzwa uhambo oluhle ezindaweni eziphakeme futhi ezinhle ...
Elinye lamadolobha amahle kakhulu eJalimane iDusseldorf. Lapha izingosi zomlando zihlanganiswe namapaki aluhlaza, namasonto ...
IViking Ship Museum, e-Oslo
AmaViking angama-protagonists omlando wase-Europe, futhi sekuyisikhathi esithile esefeshini ...
ITokyo ingenye yezinhloko-dolobha ezinkulu zomhlaba. Kuyidolobha elidlidlizela nabantu, imisebenzi, amathuba ...
I-Wax Museum, eMadrid
Uma ungathandi iminyuziyamu yakudala kepha ingavamile, eyasekuqaleni, ekhethekile, ohambweni lwakho olulandelayo oluya eMadrid ...
Yini ongayibona e-Alquézar
Sikutshela ongakubona nokwenziwe edolobheni lase-Alquézar, eliseHuesca, elinedolobha elihle elidala nemigwaqo yokuhamba izintaba.
Yini ongayibona ePalos de la Frontera
Idolobha lasePalos de la Frontera linikeza izindawo eziningi ongazibona, ngaphezu komzila ophefumulelwe yiDiscovery of America.
Ukuthola iRascafría eMadrid
Esigodini esiphakeme kakhulu saseLozoya, cishe ngamamitha ayi-100 ebangeni eliphakathi naphakathi kwezintaba ezimbili, itholakala ...
Yini ongayibona eCuenca
Sikukhombisa konke okungabonakala edolobheni laseCuenca, nezindlu zalo ezidumile ezilenga, iminyuziyamu nezikhala zemvelo.
Yini ongayibona eSeville ezinsukwini ezimbili
Seville, yeka idolobha! Ingelinye lamadolobha amahle kakhulu futhi avakashelwe eSpain, anabantu abaningi abazinzile futhi ...
ITrafalgar Square, kumele eLondon
ILondon yidolobha elenza amazwe amaningi ngobungcweti. Ngikholwa ukuthi ngale ndlela idlula iNew York, futhi yize namuhla ...
Zijabulise eJameos del Agua
Isiqhingi saseLanzarote, esingesinye sezindawo ezinabantu abaningi eCanary Islands, yiBiosphere Reserve ngakho-ke imvelo yaso ...
IKrakow Jewish Quarter
Enye yezindawo ezithakazelisa kakhulu eKrakow yingxenye yayo yamaJuda, eyaziwa nangokuthi yiKazimierz, yasungulwa ngo ...
Yini ongayibona eCovarrubias
Sikutshela konke okungabonakala futhi kwenziwe edolobheni laseCovarrubias, esifundazweni saseBurgos, idolobha elihle lasendulo.
Sikutshela konke okungabonakala futhi kwenziwe edolobheni laseValldemossa, eliseSierra de Tramuntana esiqhingini saseMallorca.
UFragas do Eume, iGalician Atlantic Forest
Sikutshela ongakubona eFragas do Eume, ipaki yemvelo enehlathi lase-Atlantic esifundazweni sase-A Coruña.
Yini ongayibona esiqhingini saseTabarca
Sikutshela ongakubona nokuthi ungafika kanjani esiqhingini esihle saseTabarca, indawo enamagugu amaningi namabhishi amahle abavakashi.
Yini ongayibona ku-Setenil de las Bodegas
Sikutshela ngezindawo ozithandayo edolobhaneni labamhlophe laseStenil de las Bodegas, idolobha elithokozisayo lase-Andalusia esifundazweni saseCádiz.
ISton Monastery, okuhehayo eZaragoza
ISpain inezindawo eziningi zokuvakasha futhi kwesinye isikhathi uyazibuza ukuthi kungani uphuma ukuhambela umhlaba kanti kuningi ...
Yini ongayibona eNyakatho Ireland
Sekuyiminyaka iNyakatho Ireland ingekho ebalazweni lezivakashi, imbozwe ngudadewabo ozimele nange ...
Yini ongayibona eRiga, eLatvia
Sikutshela okungabonakala edolobheni laseRiga, inhloko-dolobha yaseLatvia, idolobha elinezikwele ezinhle nezikhumbuzo.
Isonto elilodwa eCorsica
IMedithera ineziqhingi eziningi kepha zintathu kuphela ezinkulu futhi phakathi kwazo kukhona iCorsica, ipharadesi lemvelo ...
I-Praia, indawo eCape Verde
Ungathanda ukuya eholidini uye endaweni yase-Afrika? I-Afrika inezindawo ezingakholeki, kokubili ezwenikazi nase ...
IKrka National Park, eCroatia
ICroatia, iparele elisha ebalazweni lezivakashi laseYurophu, inezindawo eziningi ezinhle zemvelo futhi enye yazo ...
Yini ongayibona eSighisoara, eRomania
Idolobha laseSighisoara liseRomania futhi linesikhungo esihle somlando sangezikhathi zasendulo esihle kakhulu esinentshisekelo enkulu.
I-Ulaanbaatar, inhlokodolobha engcoliswe kakhulu emhlabeni
IMongolia yizwe elikude lase-Asia elingavinjelwe futhi elalikhona ngesikhathi seMpi Yomshoshaphansi ngaphansi komjikelezo we ...
ISalinas de Añana, ingcebo Yezwe laseBasque
Amafulethi kasawoti angumbono wangempela futhi kunezinye ezisinika izithombe ezinhle kakhulu. Into enhle ukuthi…
Yini ongayibona eSierra de Gata
Sikutshela konke okungabonakala noma kwenziwe endaweni yemvelo yaseSierra de Gata, indawo engaziwa enamadolobha agcwele intelezi.
Yini ongayibona eLa Alberca
Sikutshela konke okungabonakala futhi kwenziwe edolobheni laseLa Alberca, indawo ebukekayo etholakala esifundazweni saseSalamanca.
IMontenegro ingelinye lamazwe amancane kakhulu eYurophu futhi ingenye yezindawo ezinhle kakhulu ongazithola ...
IHyde Park, ipaki yasebukhosini eLondon
Amapaki ahlobisa amadolobha futhi ayindawo enhle yokuhamba, abone isigqi sendawo futhi aphumule ngesikhathi ...
Ngaphansi kweSierra Morena namakhilomitha ayi-8 ukusuka eCórdoba kutholakala iMedina Azahara, idolobha eliyimfihlakalo ukuthi ...
IYurophu inamamyuziyamu ambalwa abaluleke kakhulu kunani lamaqoqo awo, kanti omunye wawo yi ...
Sikukhombisa konke okungabonakala futhi kwenziwe endaweni yemvelo yase-Arribes del Duero emphakathini ozimele waseCastilla y León.
Yini ongayibona eSaint Jean de Luz
Idolobha laseSan Juan de Luz liyindawo yokuzilibazisa ehlobo enezindlu ezinhle zomlando ezengeza ubuhle.
Vakashela i-Arc de Triomphe, eParis
IParis inohlu lwezindawo ongeke uziphuthe futhi futhi iqukethe ukwakhiwa okuhle okubusa ...
Yini ongayibona kuZumaia
Sikutshela konke ongakubona edolobheni laseBasque iZumaia, idolobha elinesikhungo somlando nezindawo ezinhle zemvelo.
Sikutshela konke esikwaziyo ngedolobha lase-Orbaneja del Castillo, idolobha elincane elisendaweni enhle yemvelo.
IGrotto of Wonders, isimanga eHuelva
Ukujula komhlaba kudonse abantu njengamazulu. Sibheke phansi, sibheke phezulu ...
Ihlathi le-Oma, ihlathi elinobuciko
Umngani ofunda ubuciko ungitshela ukuthi i-Oma Forest iwukungenelela. Angazi okuningi nge ...
Yini ongayibona eCangas de Onís, e-Asturias
Sikukhombisa konke ongakubona ohambweni oludlula edolobheni lase-Asturian iCangas de Onís, eduze neLakes of Covadonga.
Ukuvakashela eRoyal Palace yaseMadrid
Idolobha elinjengeMadrid linezindawo eziningi ongazivakashela uma ungumvakashi. Izitolo, amapaki, omakhelwane, iminyuziyamu futhi, nezigodlo….
Yini ongayibona esigodini sase-Aran
Sikutshela zonke izindawo ongazivakashela endaweni yase-Aran Valley eLleida, eseCatalan Pyrenees.
Yini ongayibona kuZahara de los Atunes
Sikutshela konke ongakubona nokwenzayo edolobheni elisogwini iZaraha de los Atunes, elisesifundazweni saseCádiz.
IBuitrago del Lozoya nezintelezi zayo
Uma uthanda amadolobha asendulo, indawo enhle yokuzilibazisa iBuitrago del Lozoya, engekude neMadrid ...
Phambi kwamawa aseMaro naseluhlaza okwesibhakabhaka soLwandle i-Alboran, akukho lutho olusikisela ukuthi ngaphansi kwe ...
Thola ukuthi yini engabonakala futhi yenziwe edolobheni laseTaramundi, idolobha lasemaphandleni elise-Asturias elinikeza ifa elikhulu.
Imihume yase-Altamira, iSistine chapel yobuciko bangaphambi komlando
Ukutholakala kwemihume yase-Altamira ekupheleni kwekhulu le-XNUMX kwakusho ushintsho olwazini olwalukhona ...
Yini ongayibona nokuthi ungafika kanjani eLuarca
Sikutshela konke okungabonakala nokuthi ungafika kanjani edolobhaneni lokudoba laseLuarca, indawo yezokuvakasha etholakala e-Asturias.
Ayini ama-fjords aseNorway?
Bonke abantu engibaziyo abathathe isikebhe esiwela amachweba aseNorway babuya ngokwesaba. Imvelo ku ...
Sikutshela konke ongakubona edolobheni ethokomele iPuebla de Sanabria, etholakala esifundazweni saseZamora eCastilla y León.
IBurgos Cathedral, ubuhle be-gothic
Bengihlala ngithanda amasonto amaGothic kunezinye izitayela zokwakha, futhi uma kwenzeka kuwe ...
Ukuhamba ngeWater Park, eZaragoza
Izakhiwo eziningi ezakhelwe ikakhulukazi imibukiso yamazwe omhlaba noma imibukiso zigcina zihlala unomphela. Ingabe kunjalo…
Yini ongayibona eRía de Arousa
Sikutshela konke ongakubona eRía de Arousa, indawo engasogwini eGalicia lapho ungajabulela khona amadolobha amahle.
Ukuvakashela eCastillo de San Marcos
ISpain igcwele izinqaba futhi namhlanje sizogxila kokuhle kakhulu okuseCádiz, e ...
Inhlokodolobha yasePoland, iWarsaw, namuhla iyidolobha elinamandla labantu abangaba yizigidi ezi-2 lapho ...
IFlorence ingelinye lamadolobha amahle kakhulu e-Italy. Abantu abaningi bahamba izinsuku ezimbili noma ezintathu ohambweni olubanzi ezweni lonke, kepha empeleni yimina, ingabe uya eFlorence? Yebo, vakashela iKhathedrali yaseFloerncia futhi noma ngabe ukhathele, khuphuka izinyathelo ezingaphezu kuka-400 uye kudome lwayo. Imibono mihle!
ISt Paul Cathedral, eLondon
IYurophu igcwele amasonto futhi iNgilandi nayo iyathinteka. Isibonelo, eLondon, ungabona iSt. Paul Cathedral enhle, ithempeli laseSheshi. Ngabe uya eLondon? Ungakhohlwa ukuvakashela iCathedral yaseSan Pablo namagugu ayo: imipheme, idome, i-crypt, ikhwaya, amasonto. Impela konke!
Amanxiwa amaRoma abaluleke kakhulu
Sikukhombisa amanye amanxiwa amaRoma oMbuso WaseRoma asengavakashelwa emazweni ahlukahlukene.
Amapaki kazwelonke omhlaba
Sikhuluma ngamanye amapaki amahle kakhulu emhlabeni, anezikhala zemvelo zobuhle obungenakuqhathaniswa nenani lemvelo.
IRoma lingumuzi omuhle. Ngiyayithanda ngoba uyakwazi ukuhamba usuku lonke futhi umangale ngawo wonke umzuzu ...
Kunemibhoshongo eminingi emhlabeni egcwalisa imisebenzi yokuxhumana ngokuyisisekelo. Kufanele sixhume iplanethi ngemuva ...
I-Mermaid Encane yaseCopenhagen
Ngubani ongazange afunde noma afunde indaba yeThe Little Mermaid? Futhi uma bekungabhaliwe ngefomethi ke ...
Kunezikhumbuzo eziningi zasendulo ezisishiya sishaqekile futhi zisenze sizibuze, bakwenze kanjani emhlabeni? Kodwa yini ...
Isikhungo Sokuhweba Somhlaba
Imibhoshongo emibili yeWorld Trade Center yavulwa ngo-1973 futhi yahlulwa ekuhlaselweni kwamaphekula okudumile ngonyaka ka-2011….
ILiverpool ingelinye lamadolobha aziwa kakhulu eNgilandi futhi ingaphezulu nje kweminyaka engamakhulu ayisishiyagalombili ubudala. Uthi bewazi? Ngaphezu kwalokho, inezindawo eziningi. Ngabe uya eNgilandi? Vakashela iLiverpool ukuze ufunde kabanzi ngeBeatles, ngokwesibonelo, noma ujabulele indawo ethekwini elungiswe ngokuphelele.
AmaCliffs of Moher angenye yezimanga zabavakashi zase-Ireland futhi yebo, ayimilingo. Kuyamangalisa ukusika okungazelelwe komhlaba lapho uhlangana nakho Ingabe uyawathanda amawa? Ngemuva kwalokho ungaphuthelwa amaCliffs kaMoher, e-Ireland: umhlangano omnandi womhlaba, ulwandle nesibhakabhaka.
IFlorence iyinhloko-dolobha yeTuscany enhle yase-Italy, idolobha lasendulo, elihle, elihle futhi eligcwele amasiko nomlando. Konke lapha kuyathakazelisa futhi iFlorence iyindawo enhle yezivakashi e-Italy futhi awukwazi ukuyikhumbula. Iminyuziyamu yobuciko nomlando, imigwaqo yangenkathi ephakathi, izikwele, imifula, amagquma futhi, nokudla!
Selva de Oza, imvelo kanye nezokuvakasha
Siyaqhubeka nohlelo lwethu lwezokuvakasha ngaphandle, ngaphansi kwezulu, ngokuxhumana nemvelo naphakathi kwezintaba. Namuhla ithuba leHlathi. Ingabe uyathanda ukuhamba izintaba, olayini beziphu, ukukhuphuka, ukuhamba phakathi kwezihlahla ze-firs ne-beech? Bese uvakashela iSelva de Oza nobuhle bayo bemvelo.
Amabhishi ama-5 eFuerteventura eholidini lakho elilandelayo
IFuerteventura ingesinye seziqhingi ezinhle kakhulu futhi ezikhethekile eziqhingini zaseCanary ngenxa yendawo eyomile nenentaba-mlilo….
ICastillo de Colomares, isigodlo sanamuhla
IYurophu igcwele izinqaba zazo zonke izinhlobo nobudala, futhi eSpain kuningi impela ongakhetha kukho. Kepha namuhla asinakho ukwakhiwa kwangenkathi ephakathi noma uma Uma uthanda izinto ezingaziwa noma uthanda i-kitsch, khona-ke thatha uhambo lokuzungeza iMalaga futhi wazi iCastillo de Colomares, indawo engasile.
Imigede yaseZugarramurdi, ingcebo eNavarra
INavarra ibonakala isendleleni ye-Actualidad Viajes muva nje, futhi inamagugu amaningi omlando, amasiko kanye nemvelo. Namuhla sibizwa ngabathi Ngabe uyabathanda abathakathi namalangabi omlilo? Hambani niye eNavarra futhi nazi imigede yaseZugarramurdi, edume ngemikhuba yabo yobuqaba.
Lapho sicabanga nge-Ibiza, into yokuqala efika engqondweni yisiqhingi esigcwele ama-disco, ama-pub nama-coves ...
Kuleli sonto sikhuluma ngentelezi phakathi kwe-Aragon neNavarra, i-Yesa Reservoir. Phakathi kokuheha izivakashi kwale ndawo esiyibiza ngegama Ingabe uyathanda izindela zezindela zasendulo? Thatha uhambo lokuhle kunawo wonke eNavarra: Isigodlo Sezindela saseLeyre, lapho kuphumula khona amakhosi okuqala aseNavarre.
Phakathi kweNavarra neZaragoza kukhona ichibi olibona esithombeni: i-Yesa Reservoir. Uyathanda? Kuyindawo enhle enomlando wayo, ngakho-ke uma uthanda imvelo, amadolobhana alahliwe, izindlu zezindela zasendulo nelanga, ungaphuthelwa yiYesa Reservoir.
Imidanso yomhlaba eshaqisayo
Inganekwane isethi yamasiko abantu abakha ubunikazi babo futhi adluliselwe ezizukulwaneni ngezizukulwane ...
Izindawo zokubaleka zasemakhaya
Lokhu kuwa, kunamaholide amaningi alungele ukuthatha uhambo. Ukusuka enyakatho kuye eningizimu nokusuka ...
Izikhumbuzo ezibaluleke kakhulu zomhlaba
Izikhumbuzo ezibaluleke kakhulu zomhlaba kufanele zivakashelwe okungenani kanye empilweni yakho, ngakho-ke sizokwenza uhlu olufushane.
ICatalonia ngokujwayelekile kanye nesifundazwe saseBarcelona ikakhulukazi kunamadolobha amaningi amahle okufanele avakashelwe ...
Amadolobha amahle eduze kwaseMadrid
Ngo-2017 odlule idolobha laseMadrid lathola izivakashi ezingaphezu kwezigidi eziyi-9. Okusho ukwanda kwe ...
UFushimi Inari, ithempeli leminyango eyinkulungwane
IJapan inezindawo ezinhle kakhulu futhi iseluleko sami ukuyivakashela kaningi ngoba eyodwa kuphela ayanele. Ngizoya okwesine kanti kusele abaningi kakhulu. Ngabe uya eJapan uhlela ukuvakashela eKyoto? Ngemuva kwalokho hamba imizuzu engu-5 kuphela bese uvakashela iShrine likaFushimi Inari, elineminyango eyinkulungwane.
Kumenyezelwe i-Biosphere Reserve yi-UNESCO, iLas Bardenas Reales yipaki yemvelo yobuhle basendle nezwe ...
Namuhla amanoveli obugebengu nochungechunge lwethelevishini oluvela enyakatho yeYurophu asefashini. KuNetflix kunemikhiqizo eminingi yaseSweden, i-Oslo idolobha elihle futhi ezinsukwini ezimbalwa ungavakashela izivakashi zalo ezibaluleke kakhulu: izinqaba, iminyuziyamu, imikhumbi yeViking ...
Isigodlo Sezikhulu Zase-Infantado, eGuadalajara, yisakhiwo esihle kunazo zonke edolobheni laseCastilian-La Mancha. Itshe lesikhumbuzo ...
INuria Valley isigodi esisePyrenees esisendaweni engamamitha ayi-2.000 XNUMX ngaphezu kolwandle ...
Indawo Engcwele yeFatima
EPortugal kunezindawo eziningi ezihehayo nezinhle futhi besilokhu sikhuluma ngezinye zazo lapha e-Actualidad Viajes. Namuhla sekuyithuba lakhe.Uma uzovakashela eLisbon, ungakhohlwa ukuthatha uhambo lokuya eSantaurio de Fátima, liseduze kakhulu, lihle, likhulu futhi ligcwele imfihlakalo.
ISantiago de Compostela, kanye neRoma neJerusalema, ngomunye wemizi engcwele yobuKrestu. Ngesikhathi sekhulu ...
Esinye sezakhiwo ezivelela kakhulu eMalaysia yiPetronas Towers. Ungahle ungalazi igama layo kepha usuke walibona iphrofayili ephindwe kabili kaningi futhi Omunye wamabhilidi amahle kakhulu emhlabeni yiPetronas Towers yaseMalaysia. Bangumqhele weKuala Lumpur futhi awukwazi ukubaphuthelwa.
I-Anne Frank House
Sonke siyizwile indaba ka-Anne Frank. Ngandlela thile, ngokufunda incwadi, ngefilimu, nge-documentary noma ngenxa yokuthi Omunye weminyuziyamu evakashelwe kakhulu eNetherlands yi-Anne Frank House, indlu lapho u-Anne nomndeni wakhe bacasha khona kumaNazi eWWII
Elinye lamadolobha ahambela kakhulu emhlabeni ngokungangabazeki yiRoma. Ngezinkulungwane zeminyaka yomlando inokuthile kuwo wonke umuntu: amanxiwa asendulo, izakhiwo iRoma yidolobha laphakade: thola ukuthi yini ongayibona, yini ongaphuthelwa kuyo, lapho uhamba khona, yimiphi imizila okufanele uyilandele, ungayisebenzisa kanjani iRom Pass, njll.
Indawo yaseSanta Cruz, eSeville
Kuthiwani ngokuhamba udabule indawo yaseSanta Cruz, enhliziyweni yeSeville? Izindlu ezindala, i-cathedral, ama-patio, izikwele nezindawo eziningi zama-tapas.
Imizana eminingi enhle eSierra de Aracena (Huelva)
ISierra de Aracena nePicos de Aroche Natural Park, eyaziwa njengeSierra de Huelva, yi ...
Yini ongayibona eSierra de Cádiz
Iningi labantu livame ukuhlobanisa iCádiz nokuvakasha kwelanga nolwandle, noma ukujabulela ...
ILeón ingenye yalezi zindawo zokuvakasha eSpain okuthi, yize mhlawumbe zingaziwa kakhulu kunamanye amadolobha akulelizwe, ishiya ...
IMarbella ingelinye lamadolobha amahle kakhulu eMalaga futhi ithathwa njengenhlokodolobha yoGu ...
Yini ongayibona esigodini saseJerte, e-Extremadura
I-Jerte Valley itholakala e-Extremadura futhi inikeza izikhala eziningi zemvelo zobuhle obukhulu, kanye namadolobha amancane ongavakashela kuwo.
ISpanish Tuscany, ongakubona eMatarraña (Teruel)
Eduze noLwandle iMedithera, emngceleni ophakathi kweValencia, i-Aragon neCatalonia futhi kufihlwe phakathi kweLower Aragon, iMaestrazgo ...
Yini ongayibona e-Astorga, esifundazweni saseLeón
Idolobha laseLeonese i-Astorga liyindawo edlulayo yeCamino de Santiago kodwa futhi yindawo yomlando ongayithola.
Yini ongayibona eJerez de la Frontera, Andalusia
Idolobha laseJerez de la Frontera linendawo enhle yomlando nezikhumbuzo eziningi ongazibona lapho uvakashela izindawo zalo ezithakazelisayo.
ISpain iyizwe elihehayo. Hhayi ukukhuluma kuphela ngamasiko noma ngamagama okudla kodwa futhi nemvelo. Ukusuka enyakatho kuye eningizimu…
Phakathi kweSierra del Segura neSierra de Alcaraz, e-Albacete, kuneLos Calares Natural Park ...
Ingabe uthatha uhambo oluya eTokyo? Enye yezingadi ezinhle kakhulu edolobheni iShinjuku Gyoen, yona leyo ekhonjiswa ku-anime iThe Garden of Words.
Ukuhambela kuphi ngoNovemba
UNovemba yinyanga eqala inkathi ebandayo. Kungakho kubonakala sengathi ufuna eyodwa ngaphezulu ...
Isithombe | I-Asturias Tourism Ingabe uzokonga izinsuku ezimbalwa zeholide futhi ufuna ukuzisebenzisa ngo-Okthoba? Ukukhetha okuhlakaniphile! Lapho i…
Ngemuva kukaJulayi nango-Agasti sithola ukuthi amaholidi asephelile futhi ukucindezela kwangemva kokudangala kuyafika ...
Sanctuary of fireflies, wonder eMexico
IMexico inenye yezindawo ezingcwele kakhulu zikakhanyikhanyi emhlabeni. Awufuni ukuhamba ebumnyameni ozungezwe yizinkulungwane zamaphoyinti wokukhanya?
ILaguna Negra, indawo eseningizimu ye-Argentina
Ngabe uya eningizimu ye-Argentina? Ingabe uyathanda ukuhamba izintaba? Ngemuva kwalokho ungaphuthelwa indlela eya eBlack Lagoon: amahlathi, amadwala, ulwandle.
5 Izimfihlo zaseMadrid okufanele wazi
Njengenhloko-dolobha yaseSpain, iMadrid idolobha elihlanganisa amazwe amaningi eligcwele izikhumbuzo, izindawo zokudlela, izitolo, amapaki, iminyuziyamu, njll. lokho kunikeza abaningi ...
IBerlin ngezinsuku ezintathu
Yini ongayazi eBerlin ezinsukwini ezintathu? Yebo, umhlahlandlela wethu wamahora angama-72 eBerlin uveza: iminyuziyamu, izikwele, iWall ...
Iziqhingi ezintathu eziyimfihlakalo zasakazeka kulo lonke elaseYurophu
Kwesinye isikhathi sonke siphuphe ngokuya endaweni exotic futhi eyindida esenza ukuthi sizithuthele ...
Umzila WamaDolobhana Amhlophe enyakatho yeCádiz
Indlela enhle yokwazi eningizimu yeSpain, ikakhulukazi i-Andalusia, kungumzila odlula emadolobhaneni amhlophe ...
Amanye amachibi emvelo amahle kakhulu emhlabeni
Uyawathanda amanzi, ukubhukuda, ukushiza, ukuzijabulisa? Ngemuva kwalokho bhala phansi amagama wamachibi emvelo amahle kakhulu emhlabeni.
ICamden Town, indawo ehlukile yaseLondon
Ukwazi iLondon ehlukile kunazo zonke, akukho okungcono kunokuya eCamden Town, indawo edume ngezimakethe zayo ezibizayo ...
ICuevas del Soplao, umgodi obabazekayo oyingqayizivele emhlabeni
Eyaziwa ngokuthi iSistine Chapel of Geology, iSoplao Caves ingesinye sezikhumbuzo ze-geology ...
Amabhishi amahle kakhulu emhlabeni ongavakashela kuwo
Ibhishi elihle lingaphezulu kakhulu kwendawo yokubhukuda. Kuyisikhala sokuphumula ukujabulela ...
Amathuna amathuna aseRoma
Ukucabanga ngeRoma ukucabanga ngokuzalwa kwempucuko yaseNtshonalanga, amagquma ayo ayisikhombisa, ukwakheka kwawo okuhle, ...
Ihlathi le-Irati, ihlathi elikhulu kunawo wonke laseYurophu ngemuva kweHlathi Elimnyama
Enyakatho yeSpain uzothola enye yezindawo ezinhle kakhulu eSpain. Akunasidingo sokuhambela ...
Khohlwa iPlaya del Carmén neTulum, vakashela iGrutas de Tolantongo enhle. Azilibaleki! AmaGrottos, amachibi, iziphethu ezishisayo, imigudu, ama-stalagmites nama-stalactites.
IRed Square yaseRussia, kumele ibone
Ngabe uya eRussia ukuyobona iNdebe Yomhlaba ka-2018? Ngemuva kwalokho hamba yonke iRed Square: iminyuziyamu, izigodlo, izikhumbuzo, ama-mausoleums. Inakho konke.
Thola konke ongakubona e-Almería, kusukela ezindaweni zabavakashi zedolobha kuye kokuvelele esifundazweni, njengehlane elidumile laseTabernas.
Ngonyaka odlule iSpain yaphula irekhodi labo labavakashi bamazwe aphesheya ngabafika izigidi ezingama-82, okusho ukuthi ngu-8,9% ...
I-Kiev ihlanganisa ngokuphelele umlando wasendulo nowesimanje: isonto lombhishobhi kanye nezindonga, imihume, izakhiwo zaseSoviet, amathangi aseRussia kanye nenkumbulo yeChernobyl.
Uhlela uhambo oluya kwa-Israyeli? Ungaphuthelwa yiTel Aviv, nomlando wayo, izindawo ezingomakhelwane bayo, ulwandle lwayo, uhambo lwayo oluya eLwandle Olufile noma eMasada.
Yini ongayivakashela eHanoi
IVietnam iyinhloko-dolobha yaseHanoi futhi ineminyaka engaphezu kwenkulungwane yomlando ngakho ungaphuthelwa noma yikuphi ukuheha izivakashi.
Kusukela etsheni lokuqala elibekwe ngo-Okthoba 1961 ngosuku lweVirgen del Pilar kuze kube namuhla, ...
Kutholakala engxenyeni yakudala yamaJuda eToledo futhi kubhekwa njengesinagoge lasendulo elalondolozwe kahle kunazo zonke emhlabeni, sithola iSinagoge lase ...
Akuyona yonke into iMachu Picchu ePeru. Amanxiwa eCaral mahle, amadala futhi ayigugu lomhlaba.
Vakashela iLake Titicaca, uzibuze ePeru
IPeru iyindawo enhle eNingizimu Melika kanti iLake Titicaca ingelinye lamachibi amahle kakhulu emhlabeni: iziqhingi zase-totora, i-kayaking, amanxiwa emivubukulo ...
U-Huayna Picchu, umcebo ePeru
Ngabe uya ePeru? Ingabe uzovakashela iMachu Picchu? Bese ucindezela inhliziyo, wesabe i-vertigo bese ukhuphukela eHuayna Picchu. Uzoklonyeliswa ngokubukwa okuhle kakhulu!
Esihlokweni sethu sokugcina sonyaka sikunikeza ukuhlanganiswa kwengcebo yamaGugu Omhlaba ebaluleke kakhulu kubahambi.
Iminyaka eyi-100 selokhu kwatholakala imidwebo yomhume kaVillar del Humo
Ngo-2017, sekuphele iminyaka eyikhulu kwatholakala imidwebo yomhume yaseVillar del Humo, esifundazweni ...
Izindlela zokuphumula zokujabulela uKhisimusi endaweni ehlukile
Sikhuluma ngokubaleka okuthile okungajatshulelwa ngoKhisimusi, ezindaweni ezihlala lezi zinsuku ngendlela ekhethekile.
Amapaki ama-5 asemadolobheni eSpain ane-charm ekhethekile
Ebusika, sebenzisa ukukhanya nokushisa kwelanga ukwenza uhlobo oluthile lomsebenzi wangaphandle ...
Okufanele ukwenze eSolomon Islands enhle
Indawo ekude nenhle? Amabhishi, amakhorali, umhlume, izindaba zeWWII? Yebo, konke lokho nokuningi uthola eSolomon Islands.
5 iminyuziyamu yamahhala engaziwa yokuvakashela eMadrid
IMadrid inenethiwekhi yeminyuziyamu ephethwe ngumasipala lapho ungafunda khona ngomlando we ...
Iminyuziyamu ehamba phambili eTokyo
Ngabe uya eTokyo kodwa awufuni ukuwela eminyuziyamu yakudala? Bese ubhala phansi lolu hlu lweminyuziyamu exakile: ama-samurais, amapayipi endle, i-origami, izigebengu.
Izikhumbuzo ezingama-20 ezivakashelwa kakhulu emhlabeni II
Thola ezinye izikhumbuzo eziyishumi ezingaphuthelwa ohambweni lwethu emhlabeni jikelele, kufaka phakathi amadolobha asendulo.
Izikhumbuzo ezingama-20 ezivakashelwa kakhulu emhlabeni I
Namuhla sikukhombisa izikhumbuzo eziyishumi eziphezulu emhlabeni esicabanga ukuthi kufanele uzivakashele, uhlu lwezindawo ezihlaba umxhwele.
Amabhilidi aphezulu eTokyo
Ngabe uya eTokyo? Iposikhadi elihle nelingasoze lilibaleka laseTokyo ngamabhilidi alo amakhulu nemibhoshongo. Qiniseka ukuthi uvakashela iMori Tower, iTokyo Skytree neTokyo Tower.